Shabaabka ku sugan Jilib oo labo garab u kala qeybsamay iyo wararkii ugu dambeeyey dagaalka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shabaabka ku sugan Jilib oo labo garab u kala qeybsamay iyo wararkii ugu dambeeyey dagaalka
A warsame 15 November 2018 15 November 2018
Jilib oo ka mid ah degmooyinka Gobolka Jubada dhexe ee ay dhamaan gacanta ku hayaan Al-shabaab ayaa tan iyo shalay waxaa ka taagan xiisad u dhaxeysa xubnaha Al-shabaab ee degmadaasi ku sugan oo labo garab u kala jabay kana mid yihiin ajaanib ka tirsan kooxda.
Wararka ku aadan dagaalka ka dhaxeeya labaad garab ee ay u jabeen shabaabka ku sugan Jilib ayaa ah mid tan iyo shalay gelinkii danbe isa soo taraya waxaana ilo wareedyo kala duwan ay ku waramayaan in asalka khilaafka ka dhex dhashay xubnaha dirirtu ka dhexeyso ay tahay in Xubno ka mid ah Al-shabaab ay xubno kale oo ajaaniib qeyb ka yihiin kaga shakiyeen in ay gacan saar la leeyihiin Daacish.
Dadka aan ka xog wareysanay Dagaalka Al-Shabaabka ayaa ku waramaya in ajaaniib ay qeyb ka yihiin labo nin oo u kala dhashay Sudan iyo Masar uu saameyay dagaalka oo mid la dilay halka mid kalena xabsiga la dhigay.
Shabaab ka tuhun ka qaba in ay jiraan xubno ku biiraya daacish ayaa Masjid ku weeraray xubnaha ay tuhunsanaayeen oo u kamid ahaa Nasir Al-misri oo masar u dhashay oo sida la shegay mar uu la soo baxay bam gacmeed si uu isugu difaaco lagu dilay masjidki uu ku sugnaa.
Daa’uud oo kamid ahaa saraakiisha shabaab ee Gedo iyo xubno kale oo ganacsato ay qeyb ka yihiin ayaa xabsiga la dhigay dhamaan todna waxaa lagu tuhmay in ay kuu biiri rabaan Daacish sida ilo wareedyo ay Guuxa ugu warameen.
Maanta xaaladda Jilib ayaa ah mid ay ka jirto cabi badan shacabka qaar badan oo kamid ah ayaa noo shegay in aysan guryaha ka bixin oo ay ka baqayaan in dagaalka uu sameyo lana xiro ama la dilo.
Xiisadda ku aadan in Shabaab u kala jabeen labo iskaga shakisan yihiin ku biirista qeyb kamid ah ee Kooxda Dacish ayaa ah mid ka jirto degaano badan oo shabaab ay ku suagnyihiin sid ay dad badann oo xog ogaal ah noogu sheegeen , Gobolka bakool ayaana kamid ah meelaha ay ka taagantahay xiisadda u dhaxeysa Shabaab iyo xubnaha ka tirsan balse Daacish uga shaki qabaan.
ku dhufo halkaan si aad u Booqato bogga hore ee Mareeg oo laga helayo warar qarsoon oo xasaasi ah
F.G: Rukumo Wararka Mareeg si laguugu soo diro adigoo aan webka soo booqan, hadaad u baahan tahay fadlan ku dhufo Calaamadda Gambaleelka gaduudan ee kaaga muuqato Website-ka qeybta Midig kadibna raac tilmaamaha
Tagged Al-Shabab, jilib